War deg deg ah xarunta dad dhigista dowlada hoose ee magaalada Muqdisho oo saakay wax shaqa ah aysan ka socon. |
War deg deg ah xarunta dad dhigista dowlada hoose ee magaalada Muqdisho oo saakay wax shaqa ah aysan ka socon.
Waxaa gabi ahaan saakay joogsaday Shaqada Xarunta Dad dhigista Dowlada Hoose ee Xamar oo laga bixin jiray warqadaha aqoonsiga Muwaadinimo, kadib markii Baarlamaanka Soomaaliya amreen in la hakiyo shaqada Xaruntaasi.
Boqolaal dadweyne ah oo saakay aroor hore gaaray Xarunta Dad dhigista si halkaasi uga qaataan Warqadaha Aqoonsiga Muwaadinimo ayaa lagu wargaliyay in la joojiyay shaqada wax warqado ah oo la bixinaya aysan jirin.
Dadkii faraha badnaa ee gaaray Xarunta Dad dhigista oo qaarkood horey Sawiro iyo fara looga qaaday iyo kuwa Cusub ayaa buuq iyo qeylo bilaabay kadib markii loo sheegay in Shaqada xaruntaasi si KMG ah loo hakiyay.
Mid kamid ah Shaqaalaha Xarunta Dad dhigista oo goordhaw la hadlay Shabakada Allbanaadir.com ayaa sheegay in gabi ahaan saakay aysan jirin wax shaqo ah oo kasocota Xarunta Dad dhigista , waxa uuna intaa raaciyay shaqaalaha Xaruntaasi ay qaarkood guryahooda ku laabteen halka kuwa kalana ay iska joogaan xarunta iyaga oon wax shaqo ah heyn.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer ay yeesheen kadib ,maalintii shalay waxa ay u codeeyeen in la hakiyo Bixinta Warqadaha Aqoonsiga Muwaadinimo ilaa Baarlamaanka uu sharci ka soo saarayo xarumahaasina lagu baahinayo Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa u hogaansamay amarka Baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan in gabi ahaan la joojiyo bixinta warqadaha aqoonsiga Muwaadinimo kadib markii Shacabka ay cabasho badan ka keeneen xaruntaasi.